ITUNES: ERROR 54 - ITUNES - 2019
Na nchekwa "AppData" (aha zuru oke "Data Ngwa") na-echekwa data banyere ndị ọrụ niile edepụtara aha na sistemụ arụmọrụ Windows, na ihe niile arụnyere na kọmpụta na usoro mmemme. Site na ndabara, o zoro ezo, mana ekele maka isiokwu anyị taa, ịchọpụta ọnọdụ ya abụghị ihe siri ike.
Ọnọdụ nke "AppData" ndekọ na Windows 10
Dika o kwesiri igbado akwukwo obula, "Data Ngwa" dị na diski ahụ nke arụnyere OS. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a bụ C: . Ọ bụrụ na onye ọrụ n'onwe ya tinye Windows 10 na mpaghara ọzọ, ọ ga-adị mkpa iji chọọ maka nchekwa nke mmasị anyị n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 1: Ụzọ nzoba na ndekọ
Dị ka e kwuru n'elu, ndekọ ahụ "AppData" zoro ezo site na ndabara, ma ọ bụrụ na ị maara ụzọ ziri ezi na ya, ọ gaghị egbochi ya. Ya mere, n'agbanyeghị ụdị nke Windows na arụnyere na kọmputa gị, nke a ga-abụ adreesị na-esonụ:
C: Ọrụ Aha njirimara AppData
Na - nke a bụ nhọpụta nke usoro diski, na kama nke nke eji na ihe nlereanya anyị Aha njirimara kwesịrị ịbụ aha njirimara gị n'ime usoro. Gbanwee data a n'ụzọ anyị kwuru kpọmkwem, detuo uru bara uru ma tinye ya na nkwụsị aka nke ọkọlọtọ ahụ "Explorer". Iji gaa na ndekọ nke mmasị anyị, pịa na keyboard. "Tinye" ma ọ bụ na-atụ aka na akụ aka nri, nke gosiri na mbiet dị n'okpuru ebe a.
Ugbu a ị nwere ike ịlele ọdịnaya niile nke nchekwa ahụ. "Data Ngwa" na ndị nchịkọta akụkọ dị n'ime ya. Cheta na n'enweghị mkpa na ọ bụrụ na enweghi nghọtahie ihe ndekọ ahụ dị mkpa, ọ ka mma ịghara ịgbanwe ihe ọbụla ma ọ bụrụ na ị gaghị ehichapụ ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga "AppData" n'adabere onwe ya, meghee ederede ọ bụla nke adreesị a, meghee ihe ngosi nke ihe ndị zoro ezo na usoro. Ọ bụghị naanị na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a, kamakwa isiokwu dị iche na weebụsaịtị anyị ga-enyere gị aka ime nke a.
More: Otu esi eme ka ihe ngosi zoro ezo na Windows 10
Usoro 2: Ndenye Malite Iwu
Nhọrọ ahụ dị n'elu bụ mgbanwe na ngalaba "Data Ngwa" dị nnọọ mfe na ọ dịghị achọ ka ị rụọ ọrụ ndị na-adịghị mkpa. Otú ọ dị, mgbe ị na-ahọrọ usoro diski na ịkọ aha profaịlụ onye ọrụ, ọ ga-ekwe omume ịmehie. Iji wepu obere ihe ize ndụ a site na algorithm nke omume anyị, ịnwere ike iji ọrụ Windows a ma ama. Gbaa ọsọ.
Pịa igodo "Nweta + R" na keyboard.
Detuo ma kpoo iwu ahụ na ntinye ntinye% appdata%ma pịa ka imebi bọtịnụ ahụ "OK" ma ọ bụ igodo "Tinye".
Omume a ga-emepe ndekọ ahụ. "Na-agagharị"nke dị n'ime "AppData",
ka ị gaa na ndekọ ndị nne na nna pịa "Up".
Cheta iwu ka ị gaa na nchekwa "Data Ngwa" dị nnọọ mfe, dịka nchịkọta dị mkpa iji mepee windo ahụ Gbaa ọsọ. Isi ihe bụ ịghara ichefu ịlaghachi nzọụkwụ dị elu ma "hapụ" "Na-agagharị".
N'okwu a dị mkpirikpi, ị mụtala ọ bụghị naanị ebe folda ahụ dị. "AppData", kamakwa banyere ụzọ abụọ ị pụrụ isi banye n'ime ya ngwa ngwa. Na nke ọ bụla, ị ga-echeta ihe - adreesị zuru ezu nke ndekọ ahụ na diski disk ma ọ bụ iwu dị mkpa maka ịnweta ya ngwa ngwa.